Ny herinandro tao amin’ny bilaogy Boliviana – feb 2006 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Janoary 2019 8:41 GMT
Hita amin'ny teny Espaniola ao amin'ny Blogs de Bolivia ny lahatsoratra orizinaly
Nanontany ny mpaneho hevitra iray ao amin'ny dikan-teny Espaniola vao haingana indrindra amin'ny famintinan'ny Global Voices ny bilaogy Boliviana hoe, “Tsy misy lohahevitra hafa ve? Na mitantara ny sehatra ara-tsosialy sy ara-toekarena fotsiny ve ny bilaogy Boliviana?” Mety hoe miompana manodidina ireo olana ankehitriny mifandraika amin'ny fifidianana, ny vokany sy ny olana ara-politika hafa ny tontolon'ny bilaogy Boliviana. Araka ny voalaza voalohany tao amin'ny lahatsoratra fampidirana mitondra ny lohateny hoe “Ny Toetry ny bilaogy Boliviana”, misy ny karazana bilaogy marobe, anisan'izany ireo gazety manokana sy ireo sehatra hafa ho an'ny Boliviana mba hanehoany ny hevitr'izy ireo.
Ohatra vitsivitsy kely ny: Valeria Flores Sandova avy ao amin'ny Tarija izay manoratra ao amin'ny Devossol; Ada Esquirol Ríos, izay monina ankehitriny ao Italia ary ny bilaoginy Agüita Fresca sy ny La Tejedora; Alejandra Estrada Guzman ao amin'ny El Nombre de la Estrella es Ajenjo; Mariana Ruiz ao amin'ny Marea y Cielo; Isabella Fuente ao amin'ny Ergoth; Olivia Casso sy ny bilaoginy manome lohateny ho azy. Ireo sy ny sisa maro hafa dia bilaogy izay mampiasa lahatsoratra tsotra sy tononkalo mba hanehoana ny eritreritra sy ny fahatsapana amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny mpijerin'izy ireo.
Mandray ny endrika hajian'ny fiainana ao Bolivia ny sasany amin'ireo bilaogy sy ireo endrika fanehoan-kevitra malaza. Toussant sy ny bilaoginy La Voz de la Inconciencia kosa mitantara ny dia tamin'ny fiara fitateram-bahoaka, chicha (mijininika) sy ny valizy nangalarina.
Maro amin'ireo Boliviana hafa no liana amin'ny tontolon'ny teknolojia. Jose Luis Jaimes manana ny tranonkalany Pirateando la Web, izay manintona ny saina momba ny rindrambaikom-pandrafetana vaovao sy ireo mahavariana amin'ny teknolojia. Jpcik! mandray anjara amin'ny bilaogy hafa antsoina hoe Living in the Material World mifantoka tanteraka amin'ny olan'ny teknolojian'ny solosaina. Nampiasaina ho fitaovam-pianarana any amin'ny rafitra fampianarana maro ny bilaogy. Ny sekolin'ny bilaogy avy amin'ny Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz (UTEPSA) dia ahafahan'ny mpianatra avy amin'ny fianarana Elective III: Enteprising Actions (Hetsika Fanombohana fihariana) handray anjara ao amin'ny bilaogy Juventud Emprendedora (tanora manomboka fihariana).
Ny bilaogin-tsary koa dia nahita ny toerany tao anatin'ny tontolon'ny bilaogy Boliviana. Iray amin'ireo ezaka fiarahamiasa tena mahaliana indrindra ny antsoina hoe Punto de Vista (Fomba fijery). Bilaogera Boliviana maro no nandray anjara tamin'ny sary nalain'izy ireo avy amin'ny fomba fijerin'izy ireo manokana, indrindra avy eo amin'ny varavarankelin'ny efitrano fatoriana mankany amin'ny tontolo ivelany. Bilaogin-tsary hafa manan-danja ny La Vida en una Fotografia (Fiainana ao anaty sary) natsangan'i Jorge S. ao Cochabamba izay ahitana sary marobe mahaliana, sy sary maromaro misy ny tanànany amin'ny mody masoandro.
Maro ireo Boliviana nanomboka ny bilaogin'izy ireo mba hanoratra fotsiny momba ny zavatra tian'izy ireo. Vao haingana i Oscar, monina ao La Paz, no nanomboka ny bilaoginy antsoina hoe De Ahí Florece. Nanoratra fotsiny izy hoe:
Inona no tanjon'ity bilaogy ity? Eny, mba hiresaka ireo zavatra miantraika amiko, zavatra tiako, zavatra tsy tiako. Hiresaka momba ny zavatra mazava na maivamaivana kokoa, tahaka ny mozika, baolina kitra, fahitalavitra, sarimihetsika, sns.